Jereo ny fampahalalana momba ny mpanjifa sy ny antsipirian'ny politika momba ny Oniversiten'i Hodges
Fampahalalana momba ny mpanjifa ao amin'ny Oniversite Hodges
Ny fitsipika naparitaky ny departemantan'ny fanabeazam-pirenena amerikana mba hanatanterahana ny fanovana natao tamin'ny lalàm-pampianarana ambaratonga ambony tamin'ny taona 1965, araka ny fanitsiana (HEA), amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fampianarana ambaratonga ambony tamin'ny taona 1998 dia mitaky fampahafantarana ireo fanampiana ara-bola sy fampahalalana momba ny andrim-panjakana amin'ireo mpianatra eo ambanin'ny programa fanampiana ara-bola ho an'ny mpianatra. notanterahina araka ny Lohateny IV an'ny lalàna mifehy ny fampianarana ambony an'ny 1965, araka ny fanitsiana azy. Ireo fandaharana ireo dia misy ny Program Federal Pell Grant sy ny programa William Directan Federal Federal Loan. Araka ny lalàna, ny Oniversiten'i Hodges dia tsy maintsy mizara isaky ny mpianatra fampandrenesana ny fisian'ny fanampiana ara-bola sy ny fampahalalana momba ny andrim-panjakana ilaina hambara araka ny fanitsiana HEA ary mifanaraka amin'ny lalàna momba ny zon'ny fianakaviana sy ny fiainana manokana (FERPA). ) izay mifehy ny fidirana amin'ireo rakitsoratra fanabeazana ho an'ny mpianatra tazomin'ny andrim-panabeazana sy ny famoahana vaovao avy amin'ireo rakitsoratra ireo. Ny mombamomba ny mpanjifa ho an'ny mpianatra ankehitriny sy ho avy dia azo alefa amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany. Ireo mpianatra dia afaka mifandray amin'ny Office of the Registrar amin'ny alàlan'ny mailaka ao amin'ny registrar@hodges.edu mangataka kopia amin'ireto fampahafantarana ireto na raha mila fanazavana fanampiny momba ireo lohahevitra ireo. Ho fanampin'izany, ny mpianatra dia mety mitarika fanontanina manokana momba ny fanampiana ara-bola ataon'ny mpianatra finaid@hodges.edu.
Ho fanampin'izay, izahay dia nanao ny Politikanay momba ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo hita any amin'ny faran'ity pejy fanovozan-kevitra ity. Azafady mba mifandraisa aminay miaraka amin'ny fanontaniana na olana mety hanananao mikasika an'io fampahalalana io.
Fampandrenesana FERPA isan-taona
Politika fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona
Fahasamihafana amin'ny vatan'ny mpianatra
Fisoratana anarana amin'ny mpifidy
Andron'ny lalàm-panorenana sy ny zom-pirenena
Vokatry ny mpianatra - Navigator amin'ny oniversite
Fampahalalana momba ny boky (Saram-bola)
Fanekena, fankatoavana & fahazoan-dàlana
Famindrana ny fifanarahana momba ny trosa sy ny artikulasi
Politika fiarovana ny Campus (lalàna Clery)
Tahiry CARES - Tatitra federaly
HEERFII Funds Q1 Tatitra
HEERFII Funds Q2 Tatitra
HEERFIII Funds Q2 tatitra
Programme fanampiana ara-bola ho an'ny mpianatra
Fangatahana fanampiana ho an'ny mpianatra federaly
Zon'ny mpianatra sy ny andraikiny
Fandrosoana akademika mahafa-po (SAP)
Politika famerenam-bola sy fisintonana
Fitsipi-pitondran-tena momba ny andrim-panjakana
Sazy noho ny fanitsakitsahana ny lalàna mifoka rongony
Politika momba ny boky & famatsiana ho an'ny fanampiana IV
Fifanarahana antoko fahatelo ho an'ny fandoavana ny lohateny IV
Fampahalalana momba ny fanarahana
Politikan'ny fitarainan'ny mpianatra
Fitsipika momba ny fanjakana sy maso
Fitsipika momba ny naoty sy ny famatsiam-bola
Fiarovana ny mombamomba ny mpianatra
Fampahalalana ankapobeny momba ny andrim-panjakana
Fangatahana ofisialin'ny Transcript
Fampisehoana sy fahombiazan'ny mpianatra
Serivisy fametrahana asa sy asa
Fampahalalana momba ny fanarahana lohateny IX
I. Tatero tranga iray
Fanampiana eo noho eo
Raha tandindomin-doza ianao eo noho eo, na raha mino ianao fa mety hisy fandrahonana mitohy aminao na amin'ny hafa ao amin'ny Oniversite dia mifandraisa azafady Fanamafisana ny lalàna amin'ny fiantsoana 911.
Ny fikatsahana fanampiana avy hatrany dia mety ho zava-dehibe mba hiantohana ny fiarovana ara-batana, hahazoana fitsaboana, na fanampiana hafa. Mety ilaina koa ny mitahiry porofo, izay afaka manampy ny mpampihatra lalàna hamaly amin'ny fomba mandaitra.
Tatitra amin'ny University of Hodges
The Lohateny IX Coordinator dia ny olona notendren'ny Oniversite handrindra ny ezak'izy ireo hanaraka ny andraikitry ny Lohateny IX. Ny tatitra rehetra momba ny fitondran-tena tsy mendrika dia tokony halefa amin'ny mpandrindra ny lohateny IX:
Kelly Gallagher, mpandrindra ny lohateny IX
(Ny fidirana amin'ny fiofanana momba ny mpandrindra ny lohateny IX dia azo alefa Eto.)
Na iza na iza dia afaka mitatitra tranga ratsy fitondran-tena na inona na inona antony na ny antokon'olona mitory dia ilay olona voalaza fa niharan'ny fihetsika toy izany.
Ho fanampin'ny Mpandrindra ny Lohateny IX, ny mpiasa hafa dia takian'ny oniversite hanome vaovao momba ny fitondran-tena ratsy amin'ny mpandrindra ny Lohateny IX. Ireo mpiasa ireo, antsoina koa hoe Mpiasa tompon'andraikitra, dia olona notendren'ny Oniversite hamaly amin'ny anaran'ny Oniversite amin'ny fiampangana ny fanitsakitsahana ny politika mifandraika amin'ny Hodges University. Ny mpiasa tompon'andraikitra dia ny filoham-pirenena, ny filoha lefitra mpanatanteraky ny asa fitantanan-draharaha ary ny lefitra lefitra misahana ny raharaha akademika.
Ny olona iray izay mitatitra tranga iray amin'ny mpiasan'ny oniversite izay tsy mpiasan'ny mpiasa tompon'andraikitra amin'ny loza mety hitranga fa mety tsy horaisin'ny Oniversite izany. Noho izany, ny olona iray izay maniry ny hiasan'ny oniversite dia ampirisihina mafy hitory fitondran-tena ratsy amin'ny iray amin'ireo birao voalaza etsy ambony.
Tatitra tsy fantatra anarana: Ny olona rehetra dia mety hanao tatitra tsy fantatra anarana momba ny fitondran-tena ratsy. Miankina amin'ny habetsaky ny fampahalalana azonao momba ilay tranga na ireo olona voakasik'izany, mety voafetra ny fahafahan'ny oniversite mamaly ny tatitra tsy fantatra anarana. Ny mpandrindra ny lohateny IX dia hamaritra izay fepetra mety rehetra azo raisina amin'ny tatitra tsy fantatra anarana, ao anatin'izany ny fanasitranana ny tsirairay na ny vondrom-piarahamonina araka izay sahaza azy, ary koa ny hiantohana ny fanajana ny adidin'ny Clery Act.
Azafady azafady fa ny fitarainana ara-dalàna dia tsy azo apetraka amin'ny fomba tsy fantatra anarana, ary heverina fa vao napetraka raha tsy misy ny sonia na ara-batana na nomerika an'ny Mpangataka ilay fitarainana, na raha tsy izany dia manondro fa ilay Mpangataka dia ilay olona mametraka ilay fitarainana ara-dalàna.
II. Momba ny Lohateny IX
Lohateny IX amin'ny fanitsiana ny fanabeazana tamin'ny taona 1972 (Lohateny IX) dia manome hoe: "Tsy misy olona any Etazonia tokony esorina amin'ny fandraisana anjara amin'ny firaisana ara-nofo, tsy mahazo tombony, na iharan'ny fanavakavahana amin'ny fandaharam-pianarana. na hetsika mahazo fanampiana ara-bola federaly. ” Mifanaraka amin'ny Lohateny IX, ny oniversite Hodges dia manolo-tena hitazona tontolon'ny fanabeazana sy ny asa tsy misy fanavakavahana sy fanorisorenana tsy ara-dalàna.
Mifanaraka amin'ny Lohateny IX araka ny fandikàn'ny Departemantan'ny Fanabeazam-pirenena any Etazonia, ny oniversite dia nametraka politika mandrara ny fanavakavahana noho ny firaisana ara-nofo, ary manome fomba fitarainana ara-dalàna hamahana ny fandikan-dalàna. Ho an'ity tanjona ity, ny fitondran-tena dia heverina ho nitranga avy amin'ny lahy sy ny vavy raha toa ka nisy ny fitondran-tena toy izany noho ny lahy sy ny vavy, ny fironana ara-nofo, ny maha-lahy na vavy ary ny maha-lahy na vavy azy.
Ny lohateny IX dia mihatra amin'ny mpianatra, mpiasa, na olon-kafa mandray anjara amin'ny fandaharam-pianarana amin'ny oniversite na hetsika any Etazonia, na manao ahoana na manao ahoana ny lahy sy ny vavy, ny fironany ara-nofo, ny fisoratana anarana na ny toeran'ny asa, ny fahasembanana, ny firazanany, ny fivavahana na ny fiaviany. Ny fitoriana rehetra momba ny fanorisorenana ara-nofo, ny fanavakavahana ara-nofo / ny lahy sy ny vavy, ny herisetra ara-nofo, na ny fitondran-tena tsy mendrika dia tokony apetraka mifanaraka amin'ny politikan'ny Lohateny IX, na inona na inona fari-piainan'ny mpianatra sy ny asa.
III. Politikan'ny mpianatra
IV. Politikan'ny mpampianatra sy ny mpiasa
Raha tandindomin-doza ianao eo noho eo, na raha mino ianao fa mety hisy fandrahonana mitohy aminao na amin'ny hafa ao amin'ny Oniversite dia mifandraisa azafady Fanamafisana ny lalàna avy amin'i miantso ny 911.
Ny fikatsahana fanampiana avy hatrany dia mety ho zava-dehibe mba hiantohana ny fiarovana ara-batana na hahazoana fitsaboana na fanampiana hafa. Mety ilaina koa ny mitahiry porofo, izay afaka manampy ny mpampihatra lalàna hamaly amin'ny fomba mandaitra.
Ny harem-pirenena sy ny harem-pirenena hafa dia misy:
Ny fialofana ho an'ny vehivavy sy ankizy iharan'ny herisetra, 239.775.1101
Tetikasa fanampiana an'i Naples, 239.649.1404
Fanjakana sy firenena
Hotline ny herisetra an-trano any Florida, 1.800.500.1119
Hotline nasionaly herisetra an-trano, 1.800.799.7233
Hotline nasionaly fanafihana firaisana ara-nofo, 1.800.656.4673
Ny rohy mankamin'ny tranonkala na votoatin'ny tontolon'ny oniversite dia tsy maneho fankatoavana avy amin'ny Hodges University na ireo mpiara-miasa aminy.
Misaotra anao nitsidika ny tranokalan'i Hodges. Ny Anjerimanontolon'i Hodges dia manaraka ny lalàna sy fitsipika rehetra araky ny lalàna Florida, ny lalàna federaly amerikana, ary ny General Data Protection Regulation (GDPR). Hodges University dia hita amin'ny Internet amin'ny www.hodges.edu. Manana ny toeran'ny campus Myers ihany koa izahay: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Ny tranokalantsika dia manana fepetra fiarovana mba hiarovana ny fatiantoka, fanararaotana diso ary / na fanovana vaovao ao anatin'ny fifehezana anay. Izahay dia manao ezaka araka ny antonona mba hametrahana fiarovana ara-batana, elektronika ary fitantanana sahaza mba hahazoana antoka ny vaovao angoninay an-tserasera. Na izany aza, ny politika momba ny tsiambaratelo ao amin'ny tranonkala Hodges dia tsy natao ho adika fifanarahana fifanarahana.
Manangona angon-drakitra an-tsitrapo momba ny mpitsidika tranokalanay izahay amin'ny alàlan'ny famoronana kaonty, fampiharana ary endrika fifandraisana izay natolotra tamin'ny alàlan'ity tranonkala ity.
Ho fanampin'izany, mampiasa angon-drakitra fanarahana tranokala izahay mba hanomezana ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra. Mampiasa cookies amin'ny tranokalanay ihany koa izahay hiresahana sy hanamboarana fampahalalana mifototra amin'ny làlan'ny fidirana mankany amin'ny tranokala. Ity tranokala ity koa dia manangona ny mombamomba ny fifamoivoizana sy ny mpitsidika toa ny sehatra internet sy ny adiresy Internet an'ny solosaina ampiasainao amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fitaovana fanaovana an-tranonkala mahazatra sy ireo fitaovana fanarahan-dia. Ny fampahalalana nangonina dia ho an'ny fampiasana anatiny fotsiny hanohanana ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra, hamaliana ireo fangatahana mpitsidika tranokala ary ho an'ny fanadihadiana an-tranonkala.
Raha maneho hevitra na inona na inona ao amin'ny tranokalanay ianao dia mandefa an-tsitrapo ny adiresy mailakao sy ny fampahalalana hafa. Ity fampahalalana ity dia hampiasaina handefasana ny antsipirihanao amin'ny tranokalanay mifanaraka amin'ny fampiasana tsy tapaka. Raha tianao hofoanana ny mombamomba anao dia mangataha fanesorana amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny adiresy adm@hodges.edu. Tsy hivarotra na hanaparitaka ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo mihitsy izahay. Ny oniversite Hodges dia mifanaraka amin'ny fitsipika eo an-toerana, fanjakana ary federaly mifehy ny fanangonana sy fitehirizana ny mombamomba anao. Azonao atao ny miala amin'ny fampiasa amin'ny doka Google Analytics amin'ny alàlan'ny fanamoriana doka an'ny Google, doka ho an'ny fampiharana finday, na fomba hafa azo ampiasaina. Raha te-hanajanona ny fanarahan-tranonkala ianao dia azafady mba ampifanaraho amin'ny alàlan'ny tranokala misy anao ny toerana misy anao.
Ny rohy mankamin'ny loharano Internet ivelany, ao anatin'izany ny tranokala, dia omena ho fampahalalana fotsiny; izy ireo dia tsy fanamafisana na fankatoavana avy amin'ny Hodges University amin'ny iray amin'ireo vokatra, serivisy, na hevitry ny orinasa na fikambanana na olona. Ny oniversite Hodges dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahamendrehana, ny ara-dalàna na ny atin'ny tranokala ivelany na ny an'ny rohy manaraka. Mifandraisa amin'ny tranokala ivelany raha te hahalala ny valin'ny fanontaniana momba ny atiny.
Ny fampahalalana rehetra amin'ny tranokalanay dia natokana ho fampahalalana fotsiny. I Hodges dia tsy tokony hanome sosokevitra serivisy ho anao mihitsy amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny tranokalanay. Hodges dia hitazona tsy maninona amin'ny olana mety hitranga mifototra amin'ny fampahalalana hita ao amin'ny tranonkalantsika.
Ny tranokalanay dia mety havaozina amin'ny fotoana rehetra. Ny programa diplaomanay sy ny programa fanampiana ara-bola dia azo ahitsy na ovaina amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy fampandrenesana mialoha.
Amin'ny ankapobeny, ny tranonkalan'i Hodges dia natao hampiasan'ny olon-dehibe, raha tsy hoe misy marika manokana ho an'ny ankizy. Hodges dia tsy manangona fahalalana momba ny tena manokana amin'ireo ankizy latsaky ny 13 taona. Raha fantatsika fa nanangona ny mombamomba ny zaza latsaky ny 13 taona izahay izay tsy natolotra an-tsitrapo an-tsitrapo anay, dia hofafanay avy ao amin'ny rafitray izany.
Ny fampahalalana rehetra ato amin'ity tranokala ity dia zon'ny zon'ny mpamorona zon'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona tamin'ny 1976. Tsy azonao atao ny mampiasa atiny misy, fa tsy ferana amin'ny: sary, angon-drakitra na fakiolte na logo tsy misy alalana mazava avy amin'ny Hodges University.
Raha olona ao anatin'ny EU ianao ary mifandray amin'i Hodges ao anatin'ity fampandrenesana ity dia manome ireto zony manaraka ireto ny GDPR. Raha te hampiasa ireo zony ireo dia miangavy anao hifandray amin'ny Data Protection Officer ao amin'ny Kupton@hodges.edu.
Ampahafantaro - ny fanangonana sy ny fampiasana ny angon-drakitra voalaza eto;
Mangataha fidirana na fanitsiana angona manokana tsy marina momba anao;
Mangataha hamafana ny angon-drakitra manokana rehefa tsy ilaina intsony izany na raha tsy ara-dalàna ny fanodinana azy;
Tanjona amin'ny fanodinana angona manokana ho an'ny tanjona ara-barotra na amin'ny antony mifandraika amin'ny toe-javatra misy azy ireo;
Mangataha famerana ny fikirakirana ny angon-drakitra manokana amin'ny tranga manokana;
Makà angona manokana ('data portability');
Fangatahana mba tsy iharan'ny fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fanodinana mandeha ho azy ny angon-drakitra manokana, ao anatin'izany ny profiling.
Ny data manokana dia hozahana rehefa avelan'ny lalàna hitranga izany. Amin'ny tranga sasany, Hodges dia mety manome fampahalalana hafa momba ny hetsika fanodinana azy amin'ny fampandrenesana fanampiny na misaraka. Matetika, ny data manokana dia harahin'i Hodges amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
Izay nanomezanao ny fanekenao taminay.
Mba hanatanterahana ny adidin'i Hodges aminao ao anatin'ny fifanarahana asa na fisoratana anarana.
I Hodges dia mila manaraka adidy ara-dalàna (ohatra, ny fikarohana na fisorohana ny lalàna mifehy ny heloka bevava sy ny ara-bola).
Raha ilaina amin'ny tombotsoan'i Hodges ara-dalàna (na an'ny an'ny antoko fahatelo) ary ny tombontsoanao sy ny zonao fototra dia tsy tokony hihoatra ireo tombotsoanao ireo.
Hiarovana ny tombotsoan'ny zava-dehibe momba ny angona angona na olon-kafa (ohatra, raha sendra vonjy maika).
Mba hanatanterahana asa iray natao ho tombontsoan'ny besinimaro na fampiasana fahefana ofisialy natolotra antsika.
Amin'ny maha andrim-pianakaviana amerikana fianarana ambony azy, ny fanodinana saika ny angon-drakitra manokan'i Hodges dia hatao any Etazonia. Ireo mpitsidika an'ity tranonkala ity dia manaiky fa ny angona manokana omena na angonina amin'ny alàlan'ny tranokalany dia hafindra any Etazonia, ary amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny tranokala toy izany dia manaiky ianao hamindra ity famindrana ity.
Raha manana fanontaniana momba ny politikanay momba ny teny fampiasanao ianao dia mifandraisa aminay amin'ny adiresy mailaka hoe@krges.edu.